filazantsaramada – Just another WordPress.com site
IZY NO HO VAVOLOMBELONA HANAMBARA AHY.
« Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin’ny Ray, dia ny Fanahin’ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin’ny Ray, dia Izy no vavolombelona hanambara Ahy. Ary hianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria hianareo efa teto amiko hatramin’ny voalohany. » ( Jaona 15:26,27)
Jesosy manambara ny zavatra hitranga any aoriana amin’ny mpianatra, indrindra ny ahatongavan’ny Fanahy Masina izay ambaran’ny Tompo hoe Mpananatra. Raha ny lazain’i Jesosy dia afaka maniraka ny Fanahy Masina Izy. Anarana iray ilazàny Azy koa ny hoe Fanahin’ny fahamarinana, Fanahy izay mampiaiky ny fahamarinana satria tsy hahita Azy intsony ny mpianatra. Ho vavolombelona hanambara an’i Jesosy ny Fanahy, tahaka ny mpianatra koa satria efa teo amin’ny mpianatra Jesosy. Hisy ny fanenjehana ireo mpianatra. Eo no tokony hijoroany ho tena vavolombelona. Ho tena mpianatra. Hifankatia tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Ny manjo ny mpianatra dia mety hanjo ny Kristiana rehetra, koa tokony hifankatia koa ny Kristiana rehetra, hifampiantrano, hifanompo. Koa raha miteny aza dia tokony hitandrina amin’izay lazainy, ary toy ny milaza tenin’Andriamanitra. Efa antomotra ny faran’ny zavatra rehetra. Koa raha tsy nahatanteraka izany hafatry ny Tompo izany isika dia tokony hifona aminy, ka hiverina amin’ny làlana natorony. Hoy ny teniny: Hofafazako rano madio hianareo ka hadio, ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo: azo ambara amin’io hoe fafazana rano madio io ny Fanahy. Aoka ary isika hanaiky hofafazan’ny Tompo rano madio. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia aza misalasala miantso ny Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.
Publié parfilazantsaramada mai 16, 2022 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur IZY NO HO VAVOLOMBELONA HANAMBARA AHY.
FANOMEZAM-PAHASOAVANA MARO KARAZANA
Indraindray ny Baiboly dia mampitaha ny olombelona amin’ny voninkazo, mba anehoana amin’ny fiainana andavanandro fa fohy sy marefo ny fiainana. Azo marihina koa fa, toy ny voninkazo, ny olombelona dia maro karazana. Miseho ho maro karazana izy amin’ny fomba fisehony sy ny toerana ahitana azy. Ary miseho ho maro karazana izy amin’ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay ananany, araka ny asan’ny Fanahy Masina ao anatiny. Endrey ny hatsaran’ny ray na ny reny iray izay mampita amin’ny taranany ny fampiasana araka ny tokony ho izy ireo fanomezam-pahasoavana izay raisina miaraka amin’ny finoana mahavonjy an’i Jesosy Kristy. Endrey ny hatsaran’ny zanaka izay tia sy manaja, ary manoa ireo ray aman-dreniny. Endrey ny hatsaran’ny mpianatr’i Kristy izay mitory ny Filazantsarany. Toy izao no anambaran’i Paoly azy araka ny tenin’Isaia: “Akory ny hatsaran’ny tongotr’iry mitondra teny soa mahafaly” (Romana 10:15). Misy milaza hoe tsy ny tongony ihany no tsara fa ny tànany koa, ny teniny sy ny sainy. Eny, akory ny hatsaran’ireo izay manao asa am-pitiavana amin’ny anaran’ny Mpamonjy! Akory ny hatsaran’ireo izay mitafy “fitafiana tsara tarehy” (Isaia 52:1). Ny tian’izany ambara dia amin’ny finoana no itafian’izy ireo ny ankanjo fahamarinan’i Kristy. Endrika iray isehoan’ny hatsaran’ny vahoakan’Andrimanitra ny asa fanompoana izay ataony noho ny fanomezam-pahasoavana maro karazana izay nomen’ny Fanahy Masina azy ireo. Sasantsasany amin’ireo no lazain’i Paoly: “Fa ny anankiray nomen’ny Fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, … ary ny anankiray finoana,… ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana ho enti-manasitrana” (1 Korintiana 12:8,9), sy ny toy izany. Iray ihany no zava-kendren’ny Fanahy Masina raha mizara ireo fanomezam-pahasoavana amin’ny karazany tena maro samihafa ireo Izy, dia izao: ny Kristiana dia tsy hanao fanekem-pinoana fotsiny fa hitory koa fa: “Jesosy no Tompo” (1 Korintiana 12:3). Endrey izany tombontsoa! Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.
Publié parfilazantsaramada mai 9, 2022 mai 9, 2022 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FANOMEZAM-PAHASOAVANA MARO KARAZANA
Tsy maintsy tanteraka ny Teny rehetra ataon’Andriamanitra.
Perikopa : Lioka 1 :26-38
«Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra.» (Lioka 1:37)
« Hoy Jehovah tamin’i Abrahama: Ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’nytany. » Teny fikasana nitaky finoana tamin’i Abrahama. Na dia tsy nisy nanantena azy intsony aza (antitra bé izy mivady) dia nino ihany izy ary nisaina ho fahamarinana izany. Ary avy amin’ny taranany, Jesosy Kristy ‘Imanoela,’ no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Ilay Zanakondrin’Andriamanitra manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. Indro, hanan-anaka ny virjiny ka hiteraka zazalahy: ‘Imanoela’. Nino ny teny fikasana koa i Maria virjiny: inty ny ankizivavin ny Tompo, aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. Nandalo fizahan-toetra izy kanefa dia nahazo ny teny fikasana, Ary tanteraka ihany izany Teny izany. Isika rehetra koa mila mino ny famonjena nomen’Ilay Zanaka mba ho tanteraka amintsika ny famonjena. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao.
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny Feon’ny Filazantsara Lot II V 72 Bis Bel air Ampandrana Antananarivo. Misaotra indrindra.
Publié parfilazantsaramada avril 6, 2022 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Tsy maintsy tanteraka ny Teny rehetra ataon’Andriamanitra.
TE HAMPANDRAY ANJARA ANAO JESOSY
Alahady faha 3 alohan’ny Paska: Jaona 6:1-15
« …,dia hoy Izy tamin’i Filipo: Aiza no hividianantsika mofo hohanin’ireo?» (Jaona 6 :5)
Nisy vahoaka betsaka nanatona an’I Jesosy. « Aiza no hividianantsika mofo hohanin’ireo? » hoy Izy tamin’ny mpianatra. Tia anao koa Jesosy. Aiza no hahita hanina ho anao amin’ity andro ity? Mino va hianao?Sa misy zavatra hafa ilainao? Tsarovy fa Tia anao Jesosy, onena anao Izy. Jesosy mahalala izay ataony fa mizaha toetra ny finoantsika Izy. I Filipo dia tafalatsaka tamin’ny tsy finoana: «na dia mofo vidiana denaria roanjato aza tsy ampy azy rehetra ». Tandremo tsy ho tafalatsaka amin’ny tsy finoana ka hametra ny fahefàna an’Andriamanitra. Mpianatra ve hianao? Aza feranao ny fahefan’i Jesosy… Ray amandreny ve hianao? Aza feranao ny fahefan’i Jesosy amin’ny fiantohana ankohonanao… Te hampandray anjara anao Jesosy amin’ny famahana ny olana misy na dia tsy ampy aza ny eo ampelatananao Misy zazalahy aty manana mofo vary Hordea dimy sy hazan-drano mandinika roa, fa ho ampy inona moa izany amin’izao olona betsaka izao! Andriamanitra mahagaga. Feno fahatokiana Jesosy. Feno fanajana hatrany ny Rainy. » Dia nandray ny mofo ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra dia nizara izany. Mila mahatoky an’i Andriamanitra hianao Ary Mila Mino. Mila misaotra an’Andriamanitra amin’izay misy eo ampelatananao ka hampiasa izany. Aza manahy akory fa tonga dia misaotra sy mizara. Tena nahatoky an’Andriamanitra hatramin’ny farany Jesosy. » Rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy angony ny sisa tsy lany. » Mahagaga ny asan’Andriamanitra. Manana amby ampy ho antsika ny fahasoavany. Aza matahotra, matokia, fa hain’Andriamanitra ny manatanteraka izany ankehitriny aminao sy ny ankohonanao. Misaotra, Ary ampiasao izay eo ampelatananao. Mba ho zanaky ny teny fikasana (finoana) anie hianao. Tsy miova Jesosy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Publié parfilazantsaramada mars 28, 2022 mars 28, 2022 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TE HAMPANDRAY ANJARA ANAO JESOSY
Perikopa: Lioka 11:14-28
« Koa amin’izany dia aoka hanahaka an’Andriamanitra hianareo, tahaka ny zanaka malala; » (Efesiana 5:1)
Jesosy namoaka demonia moana, ary rehefa nivoaka ny demonia, dia niteny ilay moana Lioka 11:14. Hatraiza ny fahefàn’i Satana? Raha ity dia mahavita mahamoana olona iray ny demonia ary manampahefàna amin’ny fitenenan’ny olombelona. Jesosy Kristy efa niteny fa efa nomena Azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ananany fahefàna koa na ny fitenenantsika olony, na izay rehetra momba antsika na aretina inona na aretina inona, ary na dia izay momba antsika hafa izay tsy azontsika eritreretina aza. Isika koa dia efa nomeny fahefàna hamoaka demonia amin’ny Anarany sy hanasitrana ny olona voan’ny demonia moana, ary na isika aza dia ao anatin’izany. Manana fahefàna na dia amin’izay avoakan’ny vavantsika aza Andriamanitra, ary izany no nilazany ao amin’ny epistily ho an’ny Efesiana toko faha dimy, and. 1,2,3,4: « Koa amin’izany dia aoka hanahaka an’Andriamanitra hianareo tahaka ny zanaka malala, ka tsy hanindrahindra fahalotoana , na fijangajangana, na fahavetavetana na vosodratsy ( blagues salés), fa aleo misaotra.» Aoka ho feno fisaorana an’Andriamanitra ny fiainantsika rehetra. Aoka ho tsaroantsika fa harambato sy batery fiarovana ho antsika Jehovah, ary mpamonjy antsika koa Izy. Izy no fialofantsika. Voalaza fa Izy no hametraka ny teny izay tokony ho lazaintsika amin’ny fotoana na toerana izay angatahantsika ny Fanahiny. Ary na dia ny vavaka tokony ataontsika aza. « Fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika; fa ny Fanahy no mifona amin’ny fitarainana tsy azo tononina» Koa raha niteniteny foana isika na isan’izay nanao vosodratsy, …andeha hangataka ny Fanahy hifona ho antsika amin’izao ora izao, mba ho voavela ny helotsika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao.
FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ – Tél: 034 91 435 00 / E-mail : lhmmada@gmail.com / Facebook: Feon’ny Filazantsara
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny Feon’ny filazantsara. Misaotra indrindra.
Publié parfilazantsaramada mars 25, 2022 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MANAHAKA AN’ANDRIAMANITRA
FINOANA VOAZAHA TOETRA
Perikopa: Matio 15: 21-28
«…Ravehivavy, lehibe ny finoanao; tongava aminao araka izay irinao…» (Matio 15:28b)
Vehivavy nampahorian’ny demonia ny zanany vavy no nanatona an’i Jesosy. Nitalaho izy ny mba hanasitranany azy. Dia sitrana ny zanany vavy. Aoka isika tsy ho diso adiresy: Jesosy no mahavaha ny olana eo amintsika. Nizaha toetra ny finoany Jesosy. Vao mainka nifikitra mafy tamin’i Jesosy izy. Raha mandalo fizahan-toetra isika; manao ahoana ny finoantsika an’i Jesosy. Oharin’i Jesosy amin’ny amboa kely nefa dia tsy laitra nakifika. Zava-dehibe ny fifikirana amin’ny finoana an’i Jesosy. Nahazo sitraka tamin’i Jesosy Ravehivavy: «Lehibe ny finoanao». Sitrana ny zanany. Misy valiny lehibe ny faharetantsika amin’ny finoana an’i Jesosy: tanteraka ny fanasitranana. Te hahazo valiny lehibe ve isika amin’ ny fanirian’ny fontsika hahazo fanasitranana na famahana ny olana isankarazany eo amin’ny fiainantsika? Manampahefana Jesosy hanasitrana, na hamaha ny olana misy eo aminao. Mahereza. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny Foibe Feon’ny Filazantsara Lot II V 72 Bis Bel Air Ampandrana Antananarivo.
Publié parfilazantsaramada mars 14, 2022 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FINOANA VOAZAHA TOETRA
NY FANAHY MIHINTSY NO MIASA
Alahady 6 alohan’ny Paska
Perikopa : Matio 4: 1-11
« Jehovah Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao » (Matio 4:1-10b)
Jesosy; alohan’ny asa lehibe atrehiny dia nandalo fanomanana. Nentin’ny Fanahy nankany an’efitra Izy, mba alain’ny devoly Fanahy. Raha amin’ny maha olombelona tsotra dia sarotra izao zava-misy izao. Efa voaomana mialoha ny fifanandrianana: Jesosy andaniny, devoly ankilany. Fantatra mialoha eto fa haka fanahy ny devoly. Mampahatsiaro ny zava-nisy teo amin’ny Ray amandreny ara-mpanahy iray Izay niady tamin’ny dragona (satana). Nifady hanina efa-polo andro sy efa-polo alina. Voatondro mialoha ny tetika: anisany ny fifadian-kanina. Tonga ny mpaka fanahy naka fanahy. Te hibaiko an’i Jesosy izy. « Teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. ». Ny filàna ao anatin’ny olona no entin’i satana hakàna fanahy azy. Ny tenin’Andriamanitra no namalian’i Jesosy an’i satana: tsy mofo ihany no iveloman’ny olona fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra. Mila mahay ny tenin’Andriamanitra isika tahaka izao ataon’i Jesosy izao. Misy heriny ny tenin’Andriamanitra. Tsy afaka namaly i satana eto. Te hibaiko hatrany anefa satana: 1-Teneno ho tonga mofo, 2-Mianjerà, 3-Hiankohoka eto anatrehako.. Fa tenin’Andriamanitra hatrany no nampiasain’i Jesosy namaliana an’i satana. Mila ny Fanahy isika hanampy antsika na ny Teny izay ampiasaintsika. Tsy afaka misaraka amin’ny Fanahy isika: « izay rehetra andidiako anao no ambaranao. » (Jérémia 1:7b). Sarotra ny ady. Jesosy efa nandresy ary hampandresy anao koa. Minoa sy matokia Azy. « Dia nandao Azy ny devoly, ary indreo, nisy anjely Tonga ka nanompo Azy. » Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia aza misalasala manatona ny Foibe Feon’ny Filazantsara. Misaotra indrindra tompoko.
Publié parfilazantsaramada mars 11, 2022 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FANAHY MIHINTSY NO MIASA
MAMAFY SY MAMOA VOA TSARA
Alahady faha 8 alohan’ny Paska.
“Fa ireo teny amin’ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin’ny fo sady marina no tsara, dia mitana azy ka mamoa amin’ny faharetana.” (Lioka 8:15)
Jesosy mpamafy ny Teny. Nahery tamin’ny teny sy ny asa Izy. Vahoaka betsaka no niangona nanatona Azy. Karazana tany inona ny fontsika ny amin’ny hamafazany ny teniny? Raha amoron-dàlana dia hovoahitsakitsaka sy lanin’ny voromanidina. Mila fikajiana ny voa afafy. Tsy maniry intsony raha Simba ny voa. (Ohatra ny voambary akotry dia miala ny hodiny. Raha lasa fotsim-bary dia tsy afaka maniry intsony). Raha betsaka ny zavatra isankarazany ampidirintsika ao am-pontsika dia voahitsakitsaka ny tenin’Andriamanitra ka tsy afaka antenaina vokatra intsony. Simba ny Teny, tsy afaka mitombo intsony. Hoy Jesosy: « Hianareo mamono Ahy, ny teniko tsy mitombo ao anatinareo » (Jaona 8:37). Misy fahavalo ny voa afafy dia ny voromanidina. Misy fahavalo koa ny teny afafy ao am-po. Satana no fahavalo. Tsaingohany ny Teny voafafy ka tsy ho hita izay vokany. Teny voafafy tokony hamoa avo zato heny manjary tsy nahazoana voany na dia iray aza. Tsy tian’i Satana ho voavonjy isika. Raha eny ambonin’ny vatolampy kosa; Maniry ihany fa vetivety dia malazo. Mora maina ny vatolampy. Isika raha mandray ny Teny toa mafana fo am-boalohany, fa rehefa avy ny hainandro dia maina hatramin’ny fakany. Mafana fo isika any am-boalohany fa rehefa avy ny sarotra (fakam-panahy) dia resy. Eo koa ireo voafafy teny amin’ny tsilo. Maniry ihany fa voagejan’ny tsilo. Ny fanahiana, ny tahotra ny harena, ny fahafinaretana, … mangeja ny fitomboan’ny Teny. Ka raha teny tokony hiteraka finoana, sy fahavanónan’ny voa aza dia tsy mahazo satria voasakantsakana. Ny voa voafafy teny amin’ny tany tsara kosa indray; ny fahalatsahany tao amin’ny tany no ela: tonga dia maniry tsara ary mitondra voa be dia be. Fo azon’Andriamanitra antoka, fo marina, fo tsara. Fo mitana ny Teny noraisiny. Ary fo maharitra sy miaritra. Mahafoy fahotana ka manaiky ampian’i Jesosy hiala amin’izany. Sady hahazoana voa hohanina no hahazo voa afafy. Aoka ho toy izany ny fontsika dia ho sambatra isika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Publié parfilazantsaramada février 21, 2022 février 21, 2022 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MAMAFY SY MAMOA VOA TSARA
Alahady faha 9 alohan’ny Paska.
«Fa izy namaly ka nanao tamin’ny anankiray amin’ireny hoe: Ry sakaiza, tsy mba manao izay tsy marina aminao aho; tsy efa denaria va no nifanekenao tamiko?» (Matio 20:13)
Fanoharana nataon’i Jesosy hitaomana ny olona ho amin’ny fanjakan’ny lanitra. Lehilahy tompon-trano hanakarama mpiasa ho any an-tanimboalobony. Izay nanaiky hikarama dia nandeha ka nifanekena ny karama. Oharina amin’Andriamanitra ilay tompon-trano. Ny karama dia denaria iray. Olona mikatsaka ny fanjakan’ny lanitra no mpikarama ary izany fanjakana izany no karamany. Koa na tamin’ny ora inona na tamin’ny ora inona no nidirany teo dia karama iray ihany no nifanarahana: ‘ny fanjakan’ny lanitra’. Fahasoavana ny fahazoana ny fanjakan’ny lanitra. Ny tanimboaloboka dia eto amin’izao tontolo izao. Ny fandraisanao an’i Jesosy ho Tomponao sy Mpamonjinao no fanekenao ho hirahiny. Tanterahiny aminao ny famoronana vaovao: dia ny ‘voaforona ao amin’i Kristy Jesosy hanao asa tsara’. Nahazo karama daholo izay niasa teo an-tanimboaloboka satria Marina Andriamanitra. Nahazo ny fanjakana daholo izay niasa tao. Ny famonjena nataon’i Jesosy teo amin’ny hazo fijaliana dia tsy mizaha tavan’olona. Izay rehetra manatona Azy tsy ho laviny. Nifidy anao Jesosy: aza manao hoe mbola zaza aho (na hoe tsy mendrika aho na koa hoe tsy vitako izany…) fa handeha amin’izay rehetra hanirahako anao hianao. Jesosy no maniraka. Aza matahotra. Tezitra ireo efa niasa ela fa tsy tahaka ireo tara vao niditra: nitovy ihany ny karama dia ny fahazoana ny Fanjakan’ny lanitra. Moa va tsy mampahatsiahy an’i Jona nirahina ho amin’i Ninive. Tezitra Jona raha nibebaka ny mponina tao Ninive. Raha natao Batisa ho amin’i Mosesy tao amin’ny rahona sy ny ranomasina ny razan’ny zanak’isiraely nefa ny ankabiazany dia tsy sitrak’Andriamanitra fa naringana tany an’efitra. Mila miasa amin’ny tahotra izay miasa amin’ny tanimboaloboka. Fa « ny voalohany no ho farany, Ary ny farany no ho voalohany. » Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Publié parfilazantsaramada février 15, 2022 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MARINA ANDRIAMANITRA
NY VARY SY TSIMPARIFARY
Alahady faha 5 manaraka ny Epifania
«Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsimparifary.» (Matio 13:26)
Jesosy nanao fanoharana ny amin’ny Fanjakan’ny lanitra. Tahaka ny lehilahy namafy voa tsara tany an-tanimbariny. Natory ny olona, dia avy ny fahavalo namafy voa-tsimparifary. Ny tanimbary hamafazana dia ny fontsika ary ny voa tsara dia ny tenin’Andriamanitra. Satana no fahavalo ary ny voan-tsimparifary afafiny dia ny asany sy ny fombany rehetra. «Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina; Iza moa no mahafantatra ny aminy? izaho Jehovah no Mpandinika ny fo sy Mpamantatra ny Voa » (Jeremia 17:9-10a). Tsy azo antoka ny fo mamitaka. Tokony hoentina eo amin’ny Jesosy mandrakarivaka ka tsy hanafina fa hitsotra hahafoy izay nafafin’ny fahavalo mba hahazo famindram-po. Mila mikarakara ny tanimbary ny tompony indrindra ny mikarakara voa tsara amin’ny rano sy zezika izay ilain’ny voa amin’ny faniriny. «Koa mitafia famindram-po sy fiantràna…araka ny olomboafidin’Andriamanitra.» (Kolosiana 3:12). Ny fiadanan’I Kristy no hanaovana ao am-ponareo. Miaro ny fo ny fiadanan’I Kristy. «Ho voaozona izay olona matoky olona» (Jeremia 17:5a), tahaka ny olona any an-tani-hay ka tsy mba mahita na dia avy aza ny soa. «Fa ho tahina izay olona matoky an’I Jehovah» (Jeremia 17:7). Inona ary no tsara atao amin’izany rehetra izany? «Aoka ny tenin’I Jehovah hitoetra betsaka ao aminareo amin’ny fahendrena rehetra ka na inona na inona ataonareo, na amin’ny teny na amin’ny asa, dia ataovy amin’ny anaran’I Jesosy Tompo izany rehetra izany». Aoka tsy hangataka andro lava amin’izay tsara atao fandrao ho tonga tampoka ny andro anangonana ny tsimparifary hodorana. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tongava manatona ny foibe Feon’ny Filazantsara, Ampandrana Lot II V 72 Bis, Bel air Ampandrana Antananarivo. Misaotra indrindra tompoko.
Publié parfilazantsaramada février 7, 2022 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY VARY SY TSIMPARIFARY